Nchọpụta Ọpụpụ na Metro Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulAsureszọ Ọpụpụ na Metro Istanbul
25 / 03 / 2020 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey, tram
ihe ojoo oria na metro istanbul
N'ime oke ọgụ nke ọrịa coronavirus, bụ nke ghọrọ nsogbu zuru ụwa ọnụ, ụlọ ọrụ ọ bụla na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ọrụ dị mkpa. niile ebe a ụbọchị karịa 2 nde njem-ebu Turkey obodo kasị ukwuu okporo ígwè rụọ na Metro Istanbul ma na nnọchite nke njem iji chebe ahụ ike nke ma ndị na-arụ ọrụ ojii na njem na mkpara nke kọntaktị, ọ bụ ezie na ụgbọ na itieutom, refectory onye naanị mkpara nke campus, ogbako omumuihe buru ụzọ mee ka ọnọdụ dị mma maka mgbochi nje virus n’ebe ọ bụla n’ụlọ nkwakọba ihe.
Covid-19 - Gini bu Coronavirus ohuru?
Ọ bụ aha a kpọrọ ụdị nje kpatara ọrịa a na-ekwuwapụta ụwa maka obodo Wuhan nke China kemgbe mbido Jenụwarị 2020. Ọ bụ ezie na nje corona bụ nje nke ndị ikike ya maara ma ọ dịghị ebute ọrịa n'ime mmadụ, o gbasaa site na anụmanụ gaa na mmadụ ma gbasaa mmadụ site na mmụba. Azụmaahịa nke taa abụrụla ọrịa zuru ụwa ọnụ n'oge dị mkpirikpi n'ihi ebumnuche dịka ịdị mkpa na ịdị ukwuu na njem onwe onye. Na mmechi, World Health Organisation kwuputara nke a dị ka ọrịa zuru ụwa ọnụ - ntiwapụ nke ụwa niile.
Usoro nke Metro Istanbul mepụtara maka usoro, ọmụmụ na ikpe ewepụtara gburugburu ụwa bụ ndị a;
Ọrụ anyị Tupu Iyi Egwu
Dịka Metro Istanbul, mgbe ahụbeghị oria ọrịa a na obodo anyị, anyị so ndị isi obodo ukwu nke Istanbul rụọ ọrụ mgbochi.
Ndị ọrụ ụgbọ ala na mba ụwa, ndị na-ahụ maka njem ụgbọ njem na otu dị iche iche sochiri ma kpọtụrụ kọntaktị, ma na-enyocha nhazi na ọmụmụ emere n'ụwa niile. Ndi nlere na ntule a bu ndi ulo oru ulo oru ahu na - aru ​​oru ndi isi ulo oru nke ndi Istanbul, ndi Sayensi na ulo oru ndi ochichi kwesiri ekwesi, na emelitere atumatu a ma bido ihe omumu n’ime usoro nke mbido. Njikere edinam plan TÜRSİD (Turkey Okporo ígwè System Rụọ Association) na-na-akọrọ.
Nkpachapụ anya anyị megide ihe mgbawa
Kwa ụbọchị karịa 2 nde njem-ebu Turkey kasị ukwuu ọrụ nke mepere emepe okporo ígwè na usoro, anyị nọ na anyị ọrụ iji chebe ahụ ike, iji na-eme iji gbochie mgbasa nke akasiaha anyị nwere ndị na-esonụ anya iji ndụ.
Lezie anya maka ndị njem anyị:
1. Dị akụrụngwa niile na ndị ọrụ anyị kpọtụrụ, gụnyere mpaghara ime ala nke ụgbọ ala anyị niile, igwe elele, igwe mbuli elu, ndị na-ebuli elu, ndị na-anya steepụ, steepụ staircase na ebe a na-anọdụ ala, ejiriwo ihe ndị na-adịghị mma mebie ya ruo ụbọchị iri atọ. Ejiri ọgwụ na-eji ọgwụ ahụ eme ihe site na iji mmiri mee ka ọ nwee ọgwụ ndị na-emegide ahụike na-adịghị emerụ ahụ ike mmadụ.
2. Atụmatụ ọrụ nke ụlọ ọrụ njem ọha na mba na mba na
A na-enyocha ngwa Covid-19 ma na-enyocha ngwa anyị dị ugbu a.
3. Iji belata nrụgide nke uche nke ndị njem anyị na ịkọwa ha nke ọma, a kwadebere ozi na onyonyo metụtara ọmụmụ ọgwụ na nhicha. Ekesinam mme utom emi ye ndise idan̄ ye mme ndutịm usuanetop ke moto nnyịn.
4. Emebere masks maka ndị njem ahụ nsogbu nọ na njem ahụ, chọrọ ịga ụlọ ọrụ ahụike ma ọ bụ rịọ maka enyemaka ahụike.
5. Agbanyeghị mbelata nke ọnụ ọgụgụ ndị njem, ekpebiri ya ka ọ gaa n’ihu n'ụgbọ elu ahụ ka ọ ghara ime ka ndị anyị na-agafe dị ka mkpebi nke IMM
6. Ruo mkpebi nke abụọ, a kwụsịtụrụ ụgbọ elu Night Metro.
7. A na-ejikarị ya maka njem njem na ọnụ ọgụgụ ndị njem
TF90 Maçka-Taşkışla na TF1 Eyüp-Piyer Loti tefelerik, nke belatara 2%, ka emechiri nwa oge ka ha rụọ ọrụ.
8. Emere mkpebi banyere iji nnabata ụgbọ njem ọha n'efu site n'aka ndị ọrụ ahụike.
9. Iji dọọ ndị njem anyị aka na ntị “Chedo Distzọ Gị” na ụgbọ ala usoro, a na-amalite itinye akwụkwọ mmado ahụ na ịdọ aka na ntị nke ọdụ na ụgbọala ndị ahụ.
Lezienụ anya maka ndị were anyị n'ọrụ:
1. Enyere ndị ọrụ nọ n'ihe ize ndụ nke iso ndị njem nso ọzụzụ ọzụzụ ịdị ọcha, a mụbara ugboro nhicha n'akụkụ ọrụ ha.
2. N'ime ụlọ ụgbọ oloko anyị, a na-ehichapụ / kọntaktị kọntaktị nke ndị na-anya ụgbọ oloko.
3. Ewere ihe iji hụ na ịdị ọcha na nchekwa nke SMAMP (Driverless Metro Emergency Response Personnel) na-arụ ọrụ na M5 Üsküdar-Çekmeköy drivers
4. Nkwupụta na mkpebi nke IMM na Ministri Ahụike mere sochiri ozugbo, a na-ekerịta ndị ọrụ anyị ihe ọmụma na omume.
5. A na-eme ntụrụndụ n'akụkụ ọ bụla nke kọntaktị, gụnyere ụlọ ọrụ ogige anyị, ebe a na-arụ ọrụ, ebe a na-ahụkarị, okporo ụzọ na ụgbọ okporo ígwè, na akụrụngwa ọrụ, na ọtụtụ ugboro nhicha.
6. N'ebe ọnụ ụzọ ụlọ akwụkwọ ahụ dị, a malitere iji ihe eji ọkụ eme ihe na ngwaọrụ ndị na-enweghị njikọ.
7. Ejiri ezumike nchịkwa dịka iwu Onye isi ala siri dị maka ndị ọrụ anyị nwere nsogbu ahụike, nkwarụ, ụmụ nwanyị dị ime na ihe karịrị afọ 60.
8. Maka ndị ọrụ O Çalışma, e mere atụmatụ ịkwado maka ngwa ngwa #evdekal site na-eme ka ndị ọrụ ole na ole pụọ na sistemụ Ọrụ na Ọrụ Ntughari.
9. A na-emewanye ka ịdị ọcha ọcha n'ụlọ nzukọ na ebe a na-ere tii, a na-eme mkpebi ndị ọhụrụ iji gbochie kọntaktị ndị ọrụ n'ime ngalaba ndị a. Emebere mmejuputa ngwungwu emechiri na nkesa nri, a na-agbakwunye na-esochi ụlọ ọrụ cafeteria na ebe ndị ọrụ tii na atụmatụ azụmahịa.
10. Achọpụtala ndị ọrụ na-eme njem na mba ofesi ma na-achọpụta ha n'okpuru Iwu Ahụike Ahụike Atụmatụ.
11. A gwara ndị ọrụ na ụlọ ọrụ iji guzobe nkwukọrịta na ndị na-ebubata ya site na ekwentị na ozi email, ma belata ndenye ndị ọbịa na nleta ụlọ ọrụ.
12. A tụlere usoro atụmatụ na usoro ihe omume mberede na "coronavirus" na kọmitii OHS. Emezuru Atụmatụ Ọrụ Ego ma soro ndị ọrụ niile kerịta ya.
13. Ndi otu niile choro ikere òkè di ka nkuzi ulo na nzukọ ha.
14. Ihe aga eme banyere ịdị ọcha onwe onye malitere ịkesa ndị ọrụ anyị na ndị njem nọ na-ekerịta ya ugboro ugboro.
Mgbe ihe ọmụmụ ndị a niile gasịrị, a na-atụle atụmatụ nzaghachi, echiche ndị sitere na ndị njem, nkọwa na ịdọ aka ná ntị nke IMM na Ministry of Health mere ma mepụta atụmatụ maka usoro ọzọ.
Ihe nchebe mụbara na Metro na İZBAN
Enwekwu nchedo na ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Azerbaijan
A na-emezi nchebe na ọdụ ụgbọ elu nke Brussels
Ihe nchebe ọhụrụ na Atatürk Airport na ụgbọ oloko
Usoro ihe mberede okporo ụzọ na usoro mgbochi
Nchebe na ntụrụndụ ski na France na agbata ọzọ
Ihe nchebe abawanyera na mpaghara Ankara
Nchebe si France gaa n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè
Ihe nchebe ọzọ na-abịa n'ọdụ ụgbọ oloko France (Video)
Enwere ihe nchebe dị na Marmaray